Arabia Saodita : Fitokonan’ny Daholobe Tsy Hihinan-kanina Ho Fanohanana Mpikatroka Mafàna Fo Mifonja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2012 3:06 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, বাংলা, Français, عربي, Aymara, English
Nahasarika betsaka ny saina teo amin'ny tontolon'ny bitsika Saodiana i Mohammad al-Bajady, Saodiana mpikatroka mafàna afo amin'ny resaka Zo'olombelona tato anatin'ny herinandro vitsy lasa. Al-Bajady dia iray isan'ny niara-nanorina ny Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA) Fikambanana Saodiana Sivily sy Politika Miaro ny Zo ary voatàna izy hatramin'ny 21 Martsa 2011, taorian'ny nandraisany anjara taminà hetsi-panoherana iray nitakana ny hampitsaharana ny fisambontsamborana tsy an-drarinyteo anoloan'ny tranoben'ny Ministeran'ny Atitany ao Ryiadh. Notsaraina tamin'ny fomba miafina izy ary nohelohina hifonja efatra taona tamin'ny Aprily lasa teo.
Ny 14 Novambra, namoaka ity fanambaràna manaraka ity [ar] ny ACPRA:
Tao anatin'ny antso an-telefôna farany avy amin'ilay mpikatroka mafàna fo mpiaro zon'olombelona Mohammad al-Bajady, tamin'ny 19 Septambra 2012, dia niteny tamin'ny vadiny izy fa mety hanomboka fitokonana tsy hihinan-kanina avy hatrany taorian'ilay antsony, mba ho fanoherany ny fomba fitondra tsy zarizary atao azy. Ny loharanom-baovaonany no nilata taminay fa nafindra ho aminà toerana mitoka izy. Hatramin'ny nanambaràny ny hitokonany tsy hihinan-kanina, tsy nisy intsony antso an-telefôna voaray avy aminy.
Omaly 9 Desambra, @freealbjadi nilaza ny fitokonana faoben'ny olona tsy hihinan-kanina ho fanohanana an'i al-Bajady ny andron'ny 10 Desambra, izay manamarika ny Andro Iraisampirenena Ho an'ny Zon'Olombelona:
@freealbjadi: Iaino izay atrehan'i al-Bajady any am-ponja ary ambarao ny fitokonana tsy hihinan-kanina rahampitso (10 Des).
Fangon'ny fanentanana “Vonjeo i al-Bajady”
Endrika am-polony tamin'ireo mpandàla fiovàna no nananmbara fa handray anjara amin'ilay fitokonana faobe tsy hihinan-kanina ary hampiasa ny tenifototra#سأشارك_غدا_بالإضراب_عن_الطعام_تضامنا_مع_إضراب_البجادي (Handray anjara amin'ny fitokonana faobe tsy hihinan-kanina aho ho fanohanana an'i al-Bajady), isan'izany ilay mpikatroka mafàna fo Mohammad al-Qahtani, Matrook al-Faleh, gadra politika fahiny ary ilay bilaogera malaza Fouad al-Farhan ankoatra ireo olona hafa maherin'ny 200, raha toa ilay fitokonana faobe tsy hihinan-kanina natoa hanohanana an'i al-Bajady tamin'ny volana Martsa, tsy nahazo afa-tsy mpandray anjara 38 monja. Nahatonga ireo mpikatroka mafàna fo hanambara fahombiaza io.
Amin'ny fandraràna hentitra ny fihetsiketsehana rehetra, manentana ny vahoaka haneho amin'y fomba vaovao ny tsy hafaliany i Arabia Saodita, izay matetika no ny tanora no miketrika azy.